QAPHELA: kubalulekile ukuthi ugcwalise zonke izingxenye zesicelo. Abafundi bazobhekana nokuhlolwa kwengqondo. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lungaphelelanga noma lungakhombisi ngokusobala isipiliyoni esidingekayo kanye / noma ukuqeqeshwa, uhlelo lwakho lokusebenza lungavunyelwa. Uma ungenalo ulwazi lokufaka engxenyeni noma ebhokisini, sicela ubhale u-N / A.
Igama Lokuqala & Elokugcina
Isibonelo. 15 / 11 / 93
Ikheli lamanje *
Ikheli lakho lapha *
Uhlala isikhathi esingakanani lapho *
Inombolo yokuphepha komphakathi
Ifoni yeselula *
Yisiphi isikhundla ofuna ukusisebenzisa? *
Sicela ubeke uphawu ebhokisini elihambisana nokukhetha kwakho. Faka isicelo se *
- KhethaIsikhathi esigcweleIsikhathi sesikhathiIsizini / sesikhashana
Isikhathi sesikhathi sitholakala kuphela ngezikhathi ezithile zosuku. Sicela ucacise amahora ozotholakala ukuthi usebenze uma ukhethe isikhundla sesikhathi sesikhathi: *
UMsombuluko Ngo-Mardi ULwesithathu ULwesine ULwesihlanu ngoMgqibelo Sunday
Cacisa imali yakho
Idethi yokuqala yokutholakala kwakho *
Uyacelwa ukuthi usho indawo noma ikheli eliphelele lesikole noma eyunivesithi ngayinye owawufunda kuyo (Isikole samabanga aphansi, isikole samabanga aphezulu, iYunivesithi kanye nesikole se-Vocational). *
Chofoza uphawu lokuhlanganisa ukuze uthole isikhala esithe xaxa
Irekhodi lobugebengu nokuziphatha
Wake wahlulelwa? *
Uma yebo, chaza inani lokutholwa unecala, uhlobo lwecala eliholele ekugwetshweni kwecala, kwenziwa usuku okwenziwe ngalo icala, kwagwetshwa izigwebo (izi) ( s) kanye nezinhlobo (s) zokuvuselela ezitholakele. *
Ngabe uyaphuza utshwala nezinye izidakamizwa? *
Uma ukhethwe umsebenzi, ingabe uzimisele ukuhambisa isheke sangemuva? *
Uma Cha, chaza: *
Okuhlangenwe nakho kochwepheshe, sicela ubonise isipiliyoni sakho sobuchwepheshe eminyakeni emithathu edlule kusuka emsebenzini wakho wokugcina: *
Ikheli neNombolo yefoni
Isizathu (s) esishiye kuso (kwesokunxele). Yiba oqondile
Faka kuhlu izikhundla ozenzayo, imisebenzi eyenziwe, amakhono asetshenzisiwe noma atholakele, ukukhushulwa noma ukukhushulwa ngenkathi usebenza kuleli bhizinisi: *
Ukube ubuzimele, nikeza igama lenkampani:
Singakwazi yini ukuxhumana nomqashi wakho wangaphambili noma wamanje? *
Sicela unikeze uhlu okungenani izingcaphuno zomsebenzi ze-3, igama kanye nenombolo yocingo, engafakazela ukuziphatha komsebenzi wakho nokuziphatha kwakho: *
Inombolo yefoni / i-imeyli
Landa i-CV *
Khetha ifayela (ama)
Kungani ufuna ukuqashwa KongoLisolo? *
Yini oyilethela inkampani yethu uma uqashiwe? *
Yiziphi amakhono akhethekile okuhlukana nawe kwabanye abakhethiweyo? *
Sebenzisa isikhala esingezansi ukufingqa noma yiluphi ulwazi olungeziwe oludingekayo ukuze uchaze iziqu zakho ezigcwele zesikhundla othanda ukusisebenzisa: *
Ngifakazela, ngodumo lwami nangolwazi olungcono kakhulu, ukuthi zonke izimpendulo nezitatimende eziqukethwe kulolu hlelo lokusebenza ziyiqiniso futhi ziphelele. Ngiyaqonda ukuthi uma lolu hlelo lokusebenza luqukethe ulwazi olungamanga noma oludukisa, isicelo sami singanqatshwa noma ukuphela kwenkontileka yami nale nkampani.
Le nkampani inikeza amathuba afanayo emisebenzi kubo bonke abaqashi. Sihambisana nenqubomgomo yokudalwa kwemisebenzi kungakhathaliseki ukuthi uhlanga, umbala, inkolo, ubulili, ukuziphatha ngokocansi, imvelaphi kazwelonke, ubuzwe, iminyaka noma ubuzwe. Siyanitshela ukuthi amathuba akho okusebenza ngaphakathi kule nkampani ancike kuphela ekufundeni kwakho.
Siyabonga ngokugcwalisa leli fomu nentshisekelo yakho enkampanini yethu KongoLisolo
Ucingo. + 1 (888) 438-8022 | Fax. + 1 (888) 482-3335| Umsebenzi@kongolisolo.co